ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? - Myanmar Network
Posted by Myo Myint Kyaw on March 5, 2010 at 10:15 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
ဒီနေ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က SE သင်တန်းတစ်ခု တက်ချင်တာ
သွားစုံစမ်းမယ်ဆိုလို့ ၊ ကျနော်လည်း နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတာနဲ့ သူနဲ့
သင်တန်းအကြောင်း ၊ ဘာသာရပ် အကြောင်းပြောတုန်းကတော့ အဆင်ကိုပြေနေတာဘဲပေါ့။
ဒါနဲ့ နောက်ဆုံးကျတော့ ကျနော်တို့လည်း သင်တန်းစရိတ်ကို မေးကြည့်လိုက်တယ်။
သူတို့ ပြောလိုက်တဲ့ စရိတ်ကြောင့် ကျနော်လည်း တော်တော် လန့်သွားပါတယ်။ ၁
သင်တန်းကာလကလည်း ၃ လ ခွဲတည်းရယ် ပြီးတော့ ရမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီကပေးတဲ့
ရိုးရိုး Certificate လေးဘဲရမှာ။ သင်တန်းကတော့
နာမည်ကြီးသင်တန်းတစ်ခုပါ။တက်ရင်တော့ လည်း တက်တော့တက်သင့်ပါတယ်။
လက်မှတ်ဆိုတာက အရေးမကြီးဘူး တကယ်တတ်ဖို့လိုတာဆိုပေမယ့် ၊ ဒီနေ့ခေတ်မှာ
အလုပ်ရှာပြီဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်တစ်ခုခု ရှိနေမှ ရှာရတာလွယ်ပါတယ်။
အရည်အချင်းလည်း တကယ်ရှိတယ် ၊ တော်လည်း တကယ်တော်တယ်ဆိုပေမယ့် သက်မှတ်ထားတဲ့
လက်မှတ်တစ်ခုခုမှ မရှိရင် အလုပ်ရဖို့ဆိုတာ တော်တော် ခက်ခဲနေပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်လည်း သင်တန်းတွေတက် စာမေးပွဲတွေ ဖြေလုပ်နေကြတာနေမှာပါ။
အဲဒီ့အထဲမှာ ကျနော်တို့လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်လည်း ဒီနေ့ အဲလိုသင်တန်းသွားစုံစမ်းလိုက်တာ ၊
ကျနော့်သူငယ်ချင်းက တက်တော့တက်ချင်ပေမယ့် ၊ သင်တန်းစရိတ်ကို ကြားရတာနဲ့တင်
သူလည်းမတတ်နိုင်လို့ လန့်ပြေးလာခဲ့ရပါတယ်။ ကျနော့် သူငယ်ချင်းက
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပိုက်ဆံစုပြီးတက်မယ့်သူပါ။ ၇ သောင်း ၊ ၈ သောင်းလောက်အထိ
သူလည်းတတ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သိန်းကျော်သွားတော့... သူ့အိမ်ကလည်း
စိုက်ပေးမှာမဟုတ်တော့ ဒီအတိုင်း စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။
ကျနော် ပြောချင်တာက အဲလို သင်တန်းတွေ တက်ချင်ရင် ၊ အဲဒီ့လောက်
ပိုက်ဆံတွေပေးမှ ရတော့မှာလား။ လက်မှတ်တစ်ခုကို သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့
၀ယ်နေရပြီလား။ ကိုယ်တိုင်က နဂိုတော်နေတယ်ဆိုရင်တောင် ၊
ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့ အခါ လိုချင်တဲ့ လက်မှတ်ကို မရနိုင်တော့ဘူးလား။
ကျနော်တို့တွေ သင်တန်းမတက်ဘဲ ကိုယ်တိုင်လေ့လာရင် Online မှာ လေ့လာစရာတွေ
အများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ၊ အဲလိုလေ့လာတဲ့ အခါမှာလည်း Internet
Internet ထဲမှာ ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ယနေ့တိုင် အင်္ဂလိပ်လိုတွေက
များနေတော့ အကယ်လို့သာ အင်္ဂလိပ်စာမကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာဆိုရင်
အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကို သွားတက်ဖို့လိုလာပြန်ပါပြီ။ ထို့အတွက်လည်း
ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ပညာဒါန လုပ်တဲ့ သင်တန်းတွေ
ရှိပါသေးတယ်။ ၀င်ကြေး (သို့) စေတနာ ရှိသလောက် ထည့်ပေးရင် တက်လို့ရပါပြီ။
အင်္ဂလိပ်စာအတွက်တော့ အဲဒီ့နည်းနဲ့ နည်းနည်း အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
အကယ်လို့ အင်္ဂလိပ်စာလည်းတတ်တယ် ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာပြီးလို့
တကယ်တတ်သွားပြီ ဆိုပါတော့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်လို့ မရသေးပါဘူး။
လက်မှတ်တစ်ခုခုရအောင် စာမေးပွဲတွေဖြေရပါဦးမယ်။ အဲဒီ့အခါမှာလည်း
ပိုက်ဆံဆိုတာ လိုလာပြန်ပါပြီ။ နိုင်ငံတကာ စာမေးပွဲတွေ ဖြေချင်ရင်
စာမေးပွဲကြေးတင် အနည်းဆုံး ၁ သိန်းရှိပါတယ်။ သင်တန်းတက်ဖို့လိုရင်
အရာအားလုံးမှာ ပိုက်ဆံဆိုတာ လိုနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ အနည်းဆုံး ၁
သိန်းလောက်မှ မတတ်နိုင်ရင် စာမေးပွဲမဖြေနိုင်တော့သလို ၊ Internet
ဖိုးကိုပါ ပုံမှန် မတတ်နိုင်တဲ့ အခါမှာတော့ ပိုဆိုးကုန်ပါပြီ။ ဘာမှကို
ဒါမှမဟုတ်ရင် Online မှာ e-book အလကားရနိုင်ပေမယ့် ၊ အင်တာနက်
မသုံးနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ Connection နှေးလို့ လိုချင်တဲ့စာအုပ်မရတဲ့သူတွေ ၊
ဒါမှမဟုတ်ရင် Rapidshare လိုနေရာမျိုးမှာ တင်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို
လိုချင်ပေမယ့် မရနိုင်တဲ့ သူမျိုးတွေအတွက်ကော ၊ အပြင်မှာ စာအုပ်တွေ
မရှိကြဘူးလား။ အပြင်မှာ ရောင်းတဲ့ ရိုးရိုးစာအုပ်တွေကလည်း
နည်းနည်းထူပြီးတော့ လူသိများတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုခုဆိုရင် အနည်းဆုံး ၁
သောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီ့အတွက်ကော စာအုပ်ကို အလကားမပေးနိုင်ရင်တောင်မှ ၊
ဈေးချိုချိုနဲ့ ၀ယ်လို့မရနိုင်တော့ဘူးလား ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် BC နဲ့ AC
လိုမျိုး စာအုပ်ငှားပေးတဲ့ မြန်မာပိုင် စာကြည့်တိုက်တွေ ဘာလို့မရှိရတာလဲ။
သူများနိုင်ငံကတောင်မှ စာကြည့်တိုက်လာဖွင့်သေးရင် ၊ ဒီနိုင်ငံက
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကကော ဘာလို့ စာကြည့်တိုက်တွေ
လုပ်ပေးပြီးတော့ မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း ပညာလေ့လာလို့ရအောင်
မလုပ်ပေးကြတာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် စာကြည့်တိုက်ကရှိရဲ့သားနဲ့ဘဲ လူသိနည်းနေတာလား။
စာအုပ်မစုံသေးလို့ဘဲလား။ စာအုပ်မစုံရင်ကော ၊ ဘာလို့
နောက်တစ်ခု ကျနော် တွေ့ရတာက ၊ KMD , MCC စတဲ့ Computer Center တွေဟာ IDCS
လိုသင်တန်းမျိုးတွေကို ၁၀ တန်းမှာ ထူးချွန်စွာအောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကို
၁၀ တန်းမှာ ၆ ဘာသာ ၊ ၅ ဘာသာ စသည်ဖြင့် ထွက်တဲ့သူတွေဟာ အဲဒီ့ Center တွေမှာ
တက်မယ်ဆိုရင် သင်တန်းကြေးအလကားနဲ့ တက်ရပါတယ်။ စာမေးပွဲကြေး ၄ သိန်းလောက်ဘဲ
ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြပါ ၊ မြန်မာကျောင်းသား
အများစုဟာ ၁၀တန်းမှာ အဲလို ဘာသာစုံဂုဏ်ထူး ဒါမှမဟုတ်ရင်
အမှတ်ကောင်းကောင်းရခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကျောင်းမျိုးကို ရွေးချယ်ကြပါသလဲ?
သူတို့အားလုံးဟာ ၀ါသနာပါသည်ဖြစ်စေ ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ ဆေးတက္ကသိုလ်
သို့တက်ရောက်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ မိဘရဲ့ ဆန္ဒအရရော ၊ ဂုဏ်တစ်ခုအနေနဲ့ပါ ၊
အမှတ်ကောင်းတာနဲ့ မိမိရဲ့ ၀ါသနာကို မစဉ်းစားဘဲ ၊ ဆေးကျောင်းကိုသာ
မိမိဝါသနာကိုသာ ရွေးချယ်ပြီးလုပ်မယ့်သူဟာ 1 % လောက်ဘဲရှိမှာပါ။
အဲဒါကြောင့် အဲလိုလူတွေကို ခုနကလို Computer Center တွေက
ပညာသင်ဆုပေးတယ်ဆိုတာဟာ ၊ တကယ်တော့ သဲထဲရေသွန်နေကြတာပါ။
တကယ်အကျိုးရှိစေချင်တာဆိုရင် ၊ ဂုဏ်ထူးရတဲ့ သူတိုင်းကို ဆုမပေးသင့်ပါဘူး။
အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ တစ်ခုခုပြုလုပ်ပြီးတော့ တကယ်ကြိုးစားချင်တဲ့ ၊
အရည်အချင်းရှိမယ့်သူတွေ ၊ ၀ါသနာပါတဲ့ သူတွေကိုသာ ပေးသင့်ပါတယ်။
အဲဒီ့လိုဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့သူလည်း ၊ အဲဒီ့သင်တန်းမျိုးကို
အလွယ်တကူတတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ၊ ၁၀တန်းတုန်းကတည်းက IT ကို ၀ါသနာပါလို့
ကျောင်းစာသေချာမလုပ်ခဲ့ဘဲ ၊ ဂုဏ်ထူးရနည်းတဲ့သူတွေဟာလည်း
အိုင်တီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဲဒီ့လိုသင်တန်းမျိုးတွေကို တက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော်တဲ့သူကို အကျိုးရှိရှိနဲ့ သေချာရွေးချယ်ချီးမြှင့်စေချင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် စာမေးပွဲကြေးကိုပါ ထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးရှိနေသင့်ပါတယ်။
ကျနော်ဒီလိုရေးနေတာ KMD နဲ့ MCC ဘယ်သင်တန်းကိုမှ
ဂုဏ်သိက္ခာချနေခြင်းမဟုတ်တာကို နားလည်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် KMD
မှာ သင်တန်းအချို့ကို တက်လာတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ့လိုသင်တန်းမျိုးတွေကို တက်တဲ့သူတွေဟာ ပညာသင်ဆုဆိုတာသာမရှိခဲ့ရင်
ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့သူတွေဘဲတတ်ကြတာများပါတယ်။ သင်တန်းကြေးရော ၊
စာမေးပွဲကြေး ပေါင်းရင် ၈ သိန်းခန့်ကုန်မှာပါ။
ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့ မိဘတွေဟာလည်း မိမိတို့ရဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ ၀ါသနာ
အရည်အချင်းတွေကို မကြည့်နေတော့ဘဲနဲ့ ၊ IT လုပ်ငန်းဟာ ပိုက်ဆံအရလွယ်တယ် ၊
မြန်တယ်ဆိုပြီးတော့ ငွေ ၈ သိန်းကို လွယ်လွယ်လေးနဲ့ အပုံလိုက်ပစ်ပေးပြီး
ဒါပေမယ့် သင်တန်းလာတက်တဲ့သူတွေဟာ မိဘရဲ့ ဆန္ဒအရသာ လာတက်တာဖြစ်ပြီး
၀ါသနာလုံးဝမပါတဲ့အခါမှာ စာမေးပွဲတွေ အခါခါကျတာမျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီ့အခါမှာ မိဘတွေအတွက်လည်း အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းဖြစ်စေပါတယ်။
အဲဒီ့လို ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့ မိဘတွေအနေနဲ့ မိမိရဲ့ သားသမီး ဆန္ဒနဲ့
၀ါသနာကို အရင်ဆုံးကြည့်ပြီးမှ ထိုသို့သော သင်တန်းတွေကို တက်ခိုင်းတာ
သင့်လျော်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲလိုမဟုတ်ရင် မိဘတွေရဲ့ ပိုက်ဆံဟာ
အကယ်လို့ ပိုက်ဆံတအားပေါနေတယ်ဆိုရင်လည်း ငွေကြေး မတတ်နိုင် သော်လည်း
ကြိုးစားပြီးပညာသင်ချင်တဲ့ ကလေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲလို ကလေးတွေကို
ငွေကြေးထောက်ပံ့လိုက်တာဟာ ကုသိုလ်လည်းရပါတယ်။ အကျိုးလည်းရှိမှာပါ။
ကျနော့် ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း တစ်ခါထဲထည့်ပြီးတော့
ဆွေးနွေးထားတာပါ။ အရင်ကတည်းက ဒါမျိုးဆွေးနွေးမှုကို ဆွေးနွေးချင်ခဲ့ပေမယ့်
ကျနော်ကိုယ်တိုင်က ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့ သူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို နားမလည်သလို
၊ သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲတွေကိုလည်း မသိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်
ကျနော်ရေးလိုက်ရင် မှားသွားမှာဆိုးလို့ မရေးခဲ့တာပါ။
ဒီနေ့တော့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းဆီကနေပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့
ခံစားချက်တွေကို နည်းနည်းမေးပြီးတော့ ဒီစာကိုရေးလိုက်တာပါ။ ကျနော်ရေးတာဟာ
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ထိခိုက်စေလို့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း လုံးဝ မပါရှိပါဘူး။
အကယ်လို့ ထိခိုက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်ဒီနေရာကနေ အနူးအညွတ်
ဒါပေမယ့် ကျနော် ဒီစာကို ရေးရတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့
ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့ သူတွေဟာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံနဲ့ ကိုယ် လိုချင်တဲ့ ပညာ ၊
လိုချင်တဲ့ လက်မှတ်မျိုးကို ရနိုင်မယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးသွားချင်တာပါ။
Permalink Reply by zero on March 5, 2010 at 12:51
Environment can also teach usalot. Knowledge is everywhere. Do not try to change other. Just change ourselves.
Permalink Reply by yin yin lai on March 9, 2010 at 10:50
အင်း ပြောထားတာတွေက အကုန်လုံး အမှန်တွေချည်းပဲ
နောက်ကိုလည်း ဒီလို ဆွေးနွေးချက်တွေ တင်ပေးပါအုံးလို့
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on March 9, 2010 at 11:15
Thz4ur reply Yin yin lai.
Permalink Reply by rkarwaiyan on July 25, 2010 at 12:38
ဟိုင်းပါ ko nyaalinkar
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဆိုက်လေးကိုသိတာရက်ပိုင်းပဲရှိပါတယ်။ အပေါ်မှာ အကိုတွေအမတွေဆွေးနွေးထားတဲ. " ပညာကိုငွေဖြင့် ၀ယ်ယူတယ် " ဆိုတဲ့ သဘောကိုဆောင်တဲ့ ပိုက်ဆံရှိမှသာ ပညာတတ်တော့မှာလား ဆိုတဲ.ခေါ်င်းစဉ်ကို တအားစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို.လို အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်တော်တော်အရေးပါတဲ့ အစိပ်အပိုင်းဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ ko alinkar ပြောတဲ. စကားကတော့ အခြေခံ လူတန်းစား တစ်ရပ်အနေနဲ.တော့ လက်တွေ.ဆန်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိလို. ပညာမတတ်ဘူးဆိုတဲ.အစွန်းရောက်သဘောမျိုးတွေးမယ်ဆိုရင်တော့မှားမယ် ထင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိရင် ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို. မလွယ်ဘူးဆိုရင်တော. လူတိုင်းလက်ခံနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ငါးနှစ်သားလူမမည်ကလေးတစ်ယောက်ပညာသင်ဖို.အတွက် နောက်ခံ background ရှိရပါမယ်။ background ဆိုတဲ.နေရမှာလည်း supporting ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ့်သူကို ဆိုလိုတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အကို.လို မိမိရဲ. ခံစားချက်၊ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို ချပြရဲတဲ့ courage ကိုတော.လေးစာပါတယ်။ ဒီလိုအတွေးအခေါ်တွေကို ချပြနိုင်မယ့် လူငယ်တွေလည်း အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေဟာလည်း အောင်မြင်ချင်စိတ်ရှိမယ်လို. ယုံကြည်ပါတယ်။ အောင်မြင်ချင်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ သူနဲ. မပြင်းထန်တဲ. သူပဲကွာမှာပါ။ ကျွန်တော့် ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာထက် တင်ပြယုံ သက်သက်ပါ။ ကျွန်တော်စာရေးမှားခဲ.ရင်လည်း မှားတာရှိ ၀နာမိ ပါ။
Permalink Reply by KO THET ZAW OO on March 9, 2010 at 11:51
very nice discussing, i like it, thanks
Permalink Reply by Moe Wai on March 9, 2010 at 13:55
မိုးသိတာလေးတွေ ပြောကြည့်မယ်နော်။ positive thinking အကြောင်းပါ။ မိုးတို့က လူသားတွေပါ။ မိုးတို့ကြံရင် ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စာကို ဘာလို့ သင်ချင်ရတာလည်း။ မိုးက တော့ စာအကြောင်း သိပ်မသိပါဘူး။ ပညာ အကြောင်း ပဲ ပြောကြည့်မှာပါ။ မိုးတို့ မြန်မာတွေမှာ စကားပုံလေး ရှိပါတယ်။ ပညာရှာပမာ သူဖုံးစား ဆိုတာပေါ့။ ပညာကို တကယ်လို ချင်ရင် တကယ်ကို သူဖုန်းစားလို့ ကျင့်မှရမှာပါ။ ပိုက်ဆံပေးပြီး ရရှိခဲ့တဲ့ ပညာနဲ့ အရည်အချင်းကော အရည် အသွေးပါ ကွာနေမှာပါ။ ဒီနေ့ လူငယ်တွေက ပိုက်ဆံ အရမ်းရှာချင်ကြပါတယ်။ မိုးလည်းဒီ အတိုင်းပါပဲ။ လူလတ်တန်းစား မိဘက မိုးကို အမျိုးသမီး သမ္မတ တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အထိ ပညာ သင်ကြားမပေးနိုင်ပါဘူး။ မိုး သမ္မတဖြစ်စရာလည်း မလိုပါဘူး။ ဖြစ်ချင်ရင် လည်း ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမှာပါ။ ပိုက်ဆံရှာဖို့ ပိုက်ဆံပေးပြီး သင်တန်းတက်ရတာ သဘာဝကျပါတယ်။ မိုး ဖြစ်စေချင်တာ ပိုက်ဆံရှာဖို့ မဟုတ်ပဲ ပညာတတ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင်ယူစေချင်တာပါ။ ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ် သွားတဲ့ အချိန်မှာပေါ့ ပိုက်ဆံရဲ့ တန်ဖိုးဟာ တဖြည်းဖြည်း ကျသွားမှာပါ။
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on March 9, 2010 at 14:00
ဟုတ်ပါတယ် မိုးဝေ ပြောတာလည်း မှန်ပါတယ်
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့ အမြင်က တူချင်မှတူမှာပေါ့ဗျာ
Permalink Reply by Moe Wai on March 9, 2010 at 14:07
ပညာကို လိုသော် ပညာရှိကိုရှင်
မေး စဉ် နေ့ညမပြတ်။
ရူးကျွန်မူ၍ တောင်း လို့ဆိုထားပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ပညာရှိတွေ၊ ပညာတတ်တွေ၊ ပညာရှင်တွေ အများကြီးပါ။ သူတို့ကို မေးပါ မြန်းပါ။ နောက်ဆုံး သူဖုန်းစား တစ်ယောက်လို၊ ပေါချောင်ချောင် လူတစ်ယောက်လို ကျင့်ပြီး ပညာကို ရအောင် သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးပြော တာ ပညာတတ်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ပါ။ ဘုရားဟော ခဲ့သလိုပါပဲ။ ကံ၊ဥာဏ်၊ ၀ိရိယ ဆိုတာပါ။ ဘယ်အရာမဆို လို အပ်လာရင် ကံ၊ဥာဏ်၊၀ိရိယ အားကိုးနဲ့ ရအောင်ယူလို့ရပါတယ်။ ပညာလိုရင်လည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကံရှိရပါမယ်။ ဥာဏ်ရှိရပါမယ်။ လူ့ဘုံဆိုတာ ၀ိရိယ ဘုံပါ။ ၀ိရိယ အားလည်း ကောင်းရပါအုန်းမယ်။ ဒါတွေပြည့်ဆုံရင်တော့ ယောကျာင်္းလေးဆို ရင် ဘုရားတောင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
မိုးတို့မှာ အသက်ရှိနေ သ၍ အခွင့် အရေးတွေရှိနေပါတယ်။ ပိုက်ဆံ မရှိလို့ ပညာ မတတ် ဖြစ်ရတယ်ဆို တာကြီးကတော့ တစ်မျိုးကြီးပဲနော်။
ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်မှာလားလို့ မိုးကို မေးရင်တော့ မိုးဖြေတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံ မလိုပဲ ပညာရှာလို့ ရလားဆိုင်တော့ မိုး အပါအ၀င် လူ့သမိုင်း ကြီး တစ်ခုလုံး က ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို ထောက်ခံကြမှာပါ။
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on March 9, 2010 at 14:08
ဒီလိုပြောပြပေးတာ ဒါပေမဲ့ ကျနေ်ာရေးတာက
Permalink Reply by Moe Wai on March 9, 2010 at 14:12
သူဘာမှ မသိတာကို ပဲ သူသိတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုကရေးတီး ဆီကို ကောင်လေးတစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ်။ ဆိုကရေးတီး ရဲ့ပညာတွေ အားလုံးကို သူလိုချင်တယ် ဆိုပဲ။
ဆိုကရေးတီးက မပြောမဆို ကောင်လေးရဲ့ ခေါင်းကို အနီး အနားက ရေထဲ နှစ်ချလိုက်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးကောင်လေး ရေးမွန်းပြီး သေခါနီးမှ ပြန်ဆယ်လိုက်ပြီး
ပညာကို ခုနက ရေနစ်နေတုန်းတုန်း လေကို လိုလားတောင့်တသလိုမျိုး လိုအပ်နေရင် ပြန်လာခဲ့ပါတဲ့။
အမှန်တကယ်လည်း ကောင်လေးဟာပညာကို ရေနစ်နေတဲ့ လူ လေကို တောင့်တသလိုမျိုး တောင့် တသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သူဟာ ဆိုကရေးတီးဆီကမှ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ နေရတိုင်းက ပညာရနိုင်မှာပါ။
Permalink Reply by sunweaye on June 2, 2010 at 14:17
သေချာပါတယ်...နေရာတိုင်းက..certificate မရနိုင်တာလည်း..အသေအချာပါပဲ...ပိုက်ဆံမှမရှိရင်..."ကကြီးခခွေး" တောင်ရေးတတ်ဖို့...မသေချာတော့ပါဘူး...စကားတတ်တိုင်း...typing ရိုက်ဖို့အားတိုင်း...ရေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး...ပိုက်ဆံမှမရှိရင် တကယ်ကိုပညာမတတ်နိုင်တော့တဲ့ခေတ်ဖြစ်နေလို့ပါ...ပညာဒါနတွေရှိပါတယ်...bus ကားခမှမရှိရင်...ဘယ်လိုလုပ်မလဲ...အသေးစိတ်လိုက်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး..
.သူငယ်တန်းကလေးတစ်ယောက်စားရိတ်တောင်...မလွယ်တော့တာ...computer,english တွေ မပြောနဲ့...ကလေးတိုင်းစာတတ်ဖို့တောင်တို့တွေကြိုးစားရတော့မှာ...
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on March 9, 2010 at 14:15
ပြီးတော့ ပိုက်ဆံမှ မရှိတာ ဘယ်လို ပညာကို သင်မလဲ
အွန်လိုင်းမှာ ဖိုရမ်တွေ နည်းပညာဖိုရမ်တွေ လေ့လာပြီးသင်ကြတာရတာကို သိမှာပါ
အဲ့ဒီလိုပဲ ကျနေ်ာတို့ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး နည်းပညာဖိုရမ်တစ်ခုဖွှုင်ထားပါတယ်
အခြေခံကစပြီး အားလုံး သင်ပေပါတယ်
ပညာရှာပမာ သူဖုံးစား ဆိုတာပေါ့။ ပညာကို တကယ်လို ချင်ရင် တကယ်ကို သူဖုန်းစားလို့ ကျင့်မှရမှာပါ။
ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရင် အများကြီးဖြစ်လာမယ်ထင်တယ် မိုးဝေ ........ရေ